YALIS onye nkesa - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Celeste Trade bụ onye nnọchi anya YALIS na ahịa Ukraine. Ha na-ezute ndị na-ere ngwaike mpaghara, ndị na-ere ahịa n'ahịa na ndị na-emepụta ụzọ. Si 2017 na 2019, na-anaghị atọsa ibe imekọ ihe ọnụ, anyị malitere ẹkedori anyị ika nkwalite na Ukraine.
Anyhotel Vietnam Joint Stock Company bụ onye nnọchi anya YALIS ọzọ na ahịa Vietnam. Ha nwere ngụkọta ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ abụọ dị na Vietnam, bụ ndị chere ndị mmepe ụlọ maka owuwu ihe. Anyị malitere ịrụkọ ọrụ kemgbe 2014. Ugbu a, YALIS ewubela onyonyo a pụrụ ịtụkwasị obi ma nabata mpi na Hafele, Yale na Imuntex.
BHM bụ onye nnọchi anya anyị na ahịa Singapore. Ha nwere oke ama nke na-enye ngwaike ihe owuwu maka ndị mmepe ala. YALIS bidoro ịkwalite akara anyị na Singapore na 2019.
Ahịa South Korea
South Korean onye nkesa nke YALIS Brand, Joil ART bụ onye nkesa na South Korea maka ụfọdụ ụdị Europe. Amalite nkwado na akara YALIS na 2019 ma sonye na 2020 KOREABUILD na July n'okpuru akara YALIS.
Ahia Saudi Arabia
Ọ dị na Taif, obodo ọdịda anyanwụ nke dịdewere Jeddah. Co Door na-elekwasị anya na ihe ụlọ dị ka ụzọ ụzọ, mkpọchi amamịghe, ngwa ụzọ, njikwa ụlọ na Saudi Arabia. YALIS na-akwado ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ ụlọ kemgbe afọ 2019.
UAB Romida lekwasịrị anya na mkpọchi, ịlesụ, ihe mgbochi na ihe ngwaike ọnụ ụzọ ndị ọzọ na ire ere maka ihe karịrị afọ 20, ọ bụghị naanị na Lithuania, kamakwa na mba ofesi. Na-agbasa ọtụtụ ngwaahịa ya mgbe niile. YALIS na ROMIDA bidoro imekọ ihe ọnụ na 2019, ROMIDA wee bụrụ onye nkesa ahịa nke YALIS na Lithuania.